SHIPPING, DIBRAAMKA, HESHIISKA IYO RETURNS Siyaasadda - shoppingdirect24.com - SD24
TOYS, GADGETS AND DRAMED CAMERA
ART REPRESSES AND PAINTINGS
GUNTOOYIN, SNEAKERS IYO HAWLAHA
TELEFOONKA IYO BULSHADA-SHOP
YAA KA HELI KARTAA!
GURIGA, DECORATION AND GARDEN SHOP
Home > SHIPPING, LEVEL, REFUND iyo RETURNS Siyaasadda
Lacagtaada ayaad soo celineysaa haddii:
- Badeecadda la soo gudbiyey maaha sida lagu sharraxay, cabbirka ama midabka kale ee la amray
- badeecadda la soo gudbiyey waa been abuur waxaana lagu qeexay asalka
- badeecada la soo gudbiyo waxay leedahay waxyeelo kale
Anagu masuul kama nahay
- wixii khasaare ah ee baakada ama alaabada ay sababtay adeegga boostada
- haddii sheyga dib loogu soo celiyo adeegga waraaqaha boostada sababo ka baxsan koontaroolkeena
Waxaan kufaraxsanahay inaan bixinno maraakiib caalami ah oo caalami ah oo adduunka ah oo dhan Waxaanu dabooli karnaa qiimaha maraakiibta - meel kasta oo aad joogto!
Sidee baad markab baakadaha?
Baakadaha ka yimaada kuwa wax soo saara, bakhaarada, alaab-qeybiyeyaasha ama qaybiyaasha Shiinaha, Hong Kong ama Shanghai ayaa soo saari doona EPacket haddii loo heli karo dalkaaga si loo hubiyo in si deg deg ah loo bixiyo iyo haddii kale adeegyadda ugu dhaqaalaha badan ee la heli karo.
Shayga wax soo saarka ee ka yimid meelo kale oo juqraafi ah ayaa lagu fulin doonaa iyada oo la isticmaalayo maraakiibta caadiga ah, haddii aan si kale loo sheegin.
Waxyaabaha la sameeyey waxa la soo saari doonaa oo la soo saari doonaa mid ka mid ah nooca loo sameeyay oo loo baahan yahay daabacaad iyo wax soo saar wax soosaaraya. Inta badan ee laga sameeyey dalabka wax soo saarka iyo maraakiibta maraakiibta ayaa ku yaal dhowr qaaradood iyo waddamo (Mareykanka, wadamo badan oo ka tirsan Midowga Yurub iyo Australia). Inta badan xarumaha kuugu dhow ayaa loo isticmaali doonaa in ay soo saaraan oo soo saaraan sheyga. Haddii tusaale ahaan aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah waxaanu ku dadaaleynaa inaan soo saarno oo aan ka soo qaadno EU si aan uga hortagno inaad la kulanto dhibaatooyinka ama dhibaatooyinka kale ee soo dejinta. Maraykanka, Australia iyo gobollada iyo gobollada kale xalalka u dhiganta ayaa la heli karaa waxana la isticmaali doonaa, haddii la heli karo. Ka-reebitaan ayaa laga yaabaa in la adeegsado oo lagama maarmaan u ah sababo farsamo ama heerarka alaabada iyo helitaanka.
Maxaa ku saabsan caadooyinka?
Sida muuqaal kale oo online ahlers, we looma qaadi karo masuul ka ah khidmadaha caadiga ah, canshuuraha soo dejinta ama khidmadaha xayiraadda ee maxaliga ah marka alaabta la soo diro. Xaaladaha caadadu way kala duwan tahay waddankana sidoo kale waxaa jira isbedelo isdaba joog ah. Adiga oo iibsanaya alaabtayada, waxaad ogolaaneysaa in hal ama kabo baako oo hal amar ah laguu soo diro laguu soo diri karo laguna qaadi karo khidmado khidmad ah oo lagaa kici karo khidmadda marka ay yimaadaan waddankaaga iyo ku xiran waddamadaada sharci.
Waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad weydiisato ama raadiso internetka ku saabsan xaaladaha dhaqamada ee wadamadaada ka hor intaadan dalban. Badeecadaha badidoodu waxay iman doonaan iyada oo aan wax khuseeya arrimahan oo kale.
Waqtiga badeecaddu way kala duwan tahay. Kuwani waa qiyaasadayada, laakiin looma balan qaadi karo:
Goobta Qiyaasta Koontada Badeecadda
Mareykanka 4-15 Maalmaha ganacsiga
Kanada, Europe 6-25 Maalmaha ganacsiga
Australia, New Zealand 6-30 Maalmaha Shaqada
Central & South America 15-55 Maalmaha Shaqada
Meelaha kale 15-55 Maalmaha Shaqada
Ha ku siin macluumaad raad?
Haa, waxaan isticmaali doonnaa macluumaadka la socodsiinta haddii la heli karo amarkaaga. Waxaad heli doontaa email kadib markii maraakiibta amarka ah ee ku jira macluumaadkaaga raadraaca.
My raadraaca ayaa sheegay "war ah kama heli karo waqti xaadirkaan".
Shirkadaha maraakiibta qaarkood, waxay qaadataa maalmo 1-5 si ay u hirgaliyaan amarkaaga waxayna qaadan kartaa maalmo dheeraad ah 2-5 macluumaadka raadraaca si loo cusbooneysiiyo nidaamka. Haddii amarkaaga la dhigo wax ka badan maalmaha 6 ka hor iyo weli ma jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan lambarkaaga raadinta, fadlan nala soo xiriir.
waxyaabaha aan loo diri doonaa mid ka mid baakada?
Sababaha saadka ah, alaabooyinka isla iibsashada waxaa mararka qaarkood loo diraa baakado gooni ah.
Haddii aad qabto su'aalo kale, fadlan nala soo xiriir annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaan ku caawino.
SIYAASADDA IYO RETURNS Siyaasadda
Wax kasta ha noqotee sababta dib u soo celinta ama codsiga soo-celinta wax soo saarka waxay noqon kartaa, waxaan had iyo jeer isku dayaynaa inaan xal u helno!
Amarka la joojiyo
Amarada oo idil waa la joojin karaa illaa iyo inta la soo dirayo. Haddii amarkaaga la bixiyay oo aad u baahan tahay inaad bedesho ama aad joojiso amar, waa inaad nagala soo xiriirtaa isla markiiba. Marka nidaamka baako iyo maraakiibta ay bilaabeen, mar dambe looma joojin karo.
Waxaad heleysaa lacag celin marka:
- Sheyga aad dalbatay ma soo galin wakhtigii loo ballanqaaday - waxaan leenahay maalmo ah 60 dayactir ballaaran, iyada oo inta badan badeecooyinka intooda badani ay horey u soo galaan.
- Sheyga aad heshay waxaa loo xaqiijiyay inuu yahay mid dhab ah, laakiin wuxuu ahaa been
Haddii sabab kastoo aadan doonaynin badeecada aad heshay waxaad codsan kartaa lacag celin laakiin waa inaad soo celisaa sheyga oo sheyga waa in aan la isticmaalin iyo baakaddii asalka ahayd. Bedel ahaan, sababaha dhaqaalaha (gaar ahaan alaabada qiimahoodu hooseeyo) iyo go'aankeena waxaad raadsan kartaa ogolaansho inaad alaabta haysatid, fadlan horay nala soo xiriir.
Soo celinta ayaa sidoo kale suuragal ah haddii qalabka khaldan lagu heley marka la eego midabka, cabbirka, ama nooca (caddaynta loo baahan yahay [photo]).
Soo celinta ayaa sidoo kale suurtagal ah haddii tsheyga wuxuu yimid tayada aadka u liita (caddaynta loo baahan yahay [photo]).
Waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto adeeggaaga boostada haddii:
- Baakad ayaa ku timid xaalad khatar ah
- Amarka ayaa la waayay
Fadlan ogow in cabirada cabbirada la bixiyay ay yareyn karto, maaddaama cabirrada inta badan lagu qaado gacanta.
Noocyada ku jira alaabta sawiradu waxay u kala duwan yahiin sida saamaynta iftiinka, xagasha kamarad ama shaashadda kombiyuutarka.
Ma aqbali karno soo noqoshada alaabta lagu sameeyey baahidaada. Waxyaabaha la dalbaday ayaa loo aqoonsaday sida tan lagu sharxay badeecada.
Lacagaha dib looma dhigi karo haddii:
- Amarkaagii ma imanin sababo ku lug leh xakamayntaada (sida bixinta cinwaanka maraakiibta khaldan, ka fogaanshaha guriga muddada dheer iyo / ama dib ugu soo celin xafiiska boostada oo aan la aqbalin)
- Amarkaaga ma imanin sababo xaalado aan caadi aheyn oo ka baxsan koontaroolkeena (ma aha mid aan caddayn caadooyinka, dib u dhac ku yimaada musiibo dabiici ah).
Xaalado kale oo ka baxsan kormeerkeena.
Waad ku soo celin kartaa codsiyada dib u celinta 15 ka dib markii muddada ballanqaadka ah ee la bixiyay (maalmaha 60). Waxaad samayn kartaa fariin ku saabsan bogga Xidhiidhka.
Fadlan ogow in twuxuu baadhitaan iyo habka lacag bixinta waxaa maamula shirkadda MLVEDA waxana laguu wareejin doonaa boggooda habkan. Bixinta iyo lacag bixinta ayaa lagu qabtaa lacagtaada aad dooratay.
Marnaba ma arki doonno faahfaahinta bixinta lacagta xisaabta Paypal ama lambarrada kaararka deynta. Dhammaan macluumaadka noocaas ah waxay ku jiraan bixiyaha bixiyaha kaliya. Waxaan u isticmaalnaa Stripe si loogu shaqeeyo kaararka deynta - oo lagu kalsoon yahay malaayiin ganacsi oo dhan adduunka.
Liiska Dalalka EPacket Fast
FADLAN DIIWAANGALINTA IYO EEIL EMAIL VIP Codsiyada Diiwaangelinta!
LUUQADDA XERLUMAHA IYO XNUMKA XNISKA AH
LACAG LA SOCO! SHAQAALAHU WAA INUU KU SAMEEYAA SHAQAALAHAAGA - HARGAN 15% XIDHIIDHKA
Joogista Gaadiidka Socda